မြန်မာ - အိန္ဒိယနယ်စပ်ထွက် ခမ်းပတ် နာနတ်သီးများ အထွက်နှုန်းနည်းသော်လည်း၊ ဈေးကောင်းရသည့်အတွက် နာနတ်စိုက်တောင်သူများ အဆင်ပြေနေ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများက မြန်မာဘက်သို့ လာရောက် လွှဲပြောင်းပေး
စစ်တွေမြို့၌ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံ၍ မြို့သစ်စီမံကိန်းတစ်ခု ထပ်မံ အကောင်အထည်ဖော်ရန် စီစဉ်နေ
နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှုပုဒ်မဖြင့် ကိုထင်ကျော်ကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်ချမှတ်
မြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားခုနစ်ဦး တရုတ်နိုင်ငံ၌ မှို အဆိပ်သင့်၊ တစ်ဦးသေဆုံး
ရနောင်း လူသတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာရေလုပ်သားလေးဦး အယူခံအနိုင်ရပြီးနောက် လွတ်မြောက်
ပဲလေ့စ်နောက်ခံလူ ဘစ်ဆာကာ ကို မန်ယူအသင်း အပြီးသတ်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့၊ မန်ယူအသင်း၏ ပဉ္စမမြောက် ဈေးအကြီးဆုံး ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့
ဂျူဗင်တပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန် နောက်ခံလူ ဒီလစ် အကြိုသဘောတူညီမှု ရခဲ့ပြီဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာ
ချဲလ်ဆီးနည်းပြသစ် ရာထူးအတွက် လမ်းပတ်သာ အသင့်လျော်ဆုံးဟု ဂျွန်တယ်ရီ ထောက်ခံ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုနှစ် နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေ ရသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကို အတည်ပြု၊ ကျပ် ၃၁ ဘီလီယံကို တိုင်းလွှတ်တော် ခွင့်ပြု
Yangon Media Group - Yangon Times and Flower News Journal
Regional News [-- ဒေသဆိုင်ရာ သတင်းများ --]
Friday 28 Jun 2019 - 11:50
မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၇
မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးခရိုင် ခမ်းပတ်ဒေသထွက် နာနတ်သီးများမှာ ရာသီဥတုပျက်ယွင်းမှုကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းပါးသော်လည်း ဝယ်ယူမှုများပြား နေသည့်အတွက် ဈေးကောင်းရ အမြတ်ကျန်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ခမ်းပတ်နာနတ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ၏ နည်းပညာဖြင့် စိုက်ပျိုးခဲ့သော မဏိပူရနာနတ်မျိုးရင်းဖြစ်ပြီး ယခင် ကာလများက အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူ ရကသည်း ပြည်နယ်သို့လည်း ကောင်း၊ မီဇိုရမ်ဘက်သို့လည်း ကောင်း တင်ပို့ရောင်းချမှုများရှိခဲ့ ပြီး ယခုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး များ ကောင်းမွန်လာသည့်အခါ မုံရွာ၊ မန္တလေးဈေးကွက်များမှတစ် ဆင့် တရုတ်နယ်စပ်အထိတင်ပို့ ရောင်းချနေကြသည်။
Friday 28 Jun 2019 - 11:38
မူဆယ်၊ ဇွန် ၂၇
တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ဝမ်းဇီးရိုမြို့ မန်တီးကျေးရွာ ကြံစိုက်ခင်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသည့် မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားခုနစ်ဦး မှိုအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇွန် ၂၆ ရက်တွင် တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အဆိုပါကြံစိုက်ခင်းတွင် အလုပ်လုပ်နေကြသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စေတုတ္တရာ မြို့နယ်နေ ဦးထွန်းထွန်းဦး(၃၆) နှစ်၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်နေ ဦးထွန်းလင်း(၄၃)နှစ်၊ မောင်တင်ဆန်း လင်း(၁၈)နှစ်၊ မသိန်းသိန်းဝင်း(၂၈) နှစ်၊ ဦးစူပါ(၂၆)နှစ်၊ မစုမြတ်ခိုင် (၂၃)နှစ်နှင့် မကေဇင်သွယ်(၁၈) နှစ်တို့သည် ဇွန် ၂ဝ ရက်တွင် ၎င်းင်းတို့အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသော ကြံစိုက်ခင်းဘေး၌ပေါက်နေသည့် မှိုကိုချက်စားမိရာမှ မှိုအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် မြန်မာ့ရိုးရာ ဆံပင်ထုံးဖွဲ့မှု ဆံရစ်ဝိုင်းထားရှိသည့် ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာ ဒေသခံပြည်သူများ တွေ့ဆုံ
Friday 28 Jun 2019 - 11:17
မင်းဘူး၊ ဇွန် ၂၇
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာ့ရိုးရာ ဆံပင်ထုံးဖွဲ့မှု ဆံရစ်ဝိုင်းထားရှိသည့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ပွင့်ဖြူမြို့ နယ် ရေပုတ်ကြီးကျေးရွာမှ ဒေသ ခံပြည်သူများနှင့် ဇွန် ၂၇ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်က ရေပုတ်ကြီး ကျေးရွာတွင် ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများမှာ လေးတန်းအထိ သာနေသူများသဖြင့် ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ကြားကြ ရန်နှင့် မိဘများမှလည်းကလေး များကို ပညာရေးမြှင့်တင်ပေးရန် မှာကြားခြင်း၊ ထို့ပြင် ကျန်းမာရေး စိုက်ပျိုးရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပတ် သက်၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြင်ပလေထု ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်စဉ် လူဦးရေ ၃ ဒသမ ၇ သန်းခန့်သေဆုံးနေ
Friday 07 Jun 2019 - 04:26
ပြင်ပလေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင်နှစ်စဉ် လူဦးရေ ၃ ဒသမ ၇ သန်းခန့်သေဆုံးနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာဆန်းစစ်တွေ့ရှိချက် အရသိရကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြားသည်။ ဇွန် ၅ ရက်နံနက် ၈ နာရီက မကွေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြား ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ရာအိမ်မှူးများကို သင်တန်းပို့ချမည်
Friday 07 Jun 2019 - 04:24
အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် စွမ်း ဆောင်ရည်မြင့်မားလာစေရန်အတွက် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ် စုများမှ ရာအိမ်မှူးများကို လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေးသင် တန်းပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဇွန်လတတိယပတ်တွင် တိုင်း ဒေသကြီးရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာ အုပ်စုများမှ ရာအိမ်မှူး ၁၆ဝ၉ဝ ကို သင်တန်းပို့ချနိုင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး သင်တန်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြေ စာရင်း ဦးစီးဌာနနှင့်ဥပဒေရုံးတို့မှ သိသင့်သိထိုက်သည်များကို ထုတ်နုတ်၍ သင်တန်းများပို့ချသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် ကျင်းပမည်
Friday 07 Jun 2019 - 04:22
မော်လမြိုင်၊ ဇွန် ၅
ဒုတိယအကြိမ် မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အထူးအ စည်းအဝေး(၁/၂ဝ၁၉)ကို ဇွန် ၁၂ ရက်မှစတင်ကျင်းပမည်ဖြစ်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ မေ ၂၈ ရက်က ကြိုတင်ဖိတ်ကြား ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်တင်အိက မေ ၃၁ ရက်တွင် ပြောကြားသည်။ ''အထူးအစည်းအဝေးခေါ် မယ်ဆိုရင် ၁၅ ရက်ကြိုတင်အ ကြောင်းကြားရမယ်ဆိုလို့ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မေ ၂၈ ရက်ကတည်းက အကြောင်း ကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်''ဟု ဒေါ် တင်အိကပြောသည်။
ရခိုင် မြို့နယ်ငါးခုတွင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများ ဆောက်လုပ်ရန် ပြည်နယ် အစိုးရစီစဉ်
Thursday 06 Jun 2019 - 04:57
စစ်တွေ၊ ဇွန် ၅
ရခိုင်ပြည်နယ် ရှိ မြို့နယ်ငါးခုတွင် စစ်ဘေးရှောင် စခန်းများဆောက်လုပ်ရန် ပြည် နယ်အစိုးရက စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါစခန်းများကို ဘူးသီး တောင်မြို့နယ်တွင် မြောင်းနားကျေး ရွာနှင့် အထက် ကျွဲချိုမော်ကျေး ရွာ၊ ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် သောင်း ဒရားကျေးရွာနှင့် ရွာသစ်ကေကျေး ရွာ၊ ပုဏ္ဏားကျွန်းမြို့နယ်တွင် အထက် မြတ်လှဲကျေးရွာနှင့် သာစည်ကျေး ရွာ၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်တွင် တိမ်ညို ကျေးရွာနှင့် ထမ္မာရာဇ်မြို့သစ်ရပ် ကွက်၊ မင်းပြားမြို့နယ်တွင် နဒင် ကျေးရွာတို့၌ ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးမှသိရသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းသို့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် စီမံကိန်းများ လေထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရေး သေချာကြပ်မတ်ပြီးမှ ခွင့်ပြုမည်ဟု တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ပြော
Thursday 06 Jun 2019 - 04:56
စစ်ကိုင်း၊ ဇွန် ၅
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လာ ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမည့် စီမံကိန်း၊ အလုပ်ရုံနှင့်စက်ရုံများ လေထုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ် ညမ်းမှု မဖြစ်စေရေးအတွက် နည်းပညာများ အသုံးပြုကာ တာဝန်ယူမှုများကို သေချာစိစစ် ကြပ်မတ်ပြီးမှသာ ခွင့်ပြုသွား မည်ဟု စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာ မြင့်နိုင် က ပြောကြားသည်။ ဇွန် ၅ တွင် ကျရောက် သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန့်ကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနေ့ အခမ်းအနားတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီး ချုပ်က ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြား ခြင်းဖြစ်သည်။
Page 1 of 223
World News (1783)
Copyright © 2012-2018 Yangon Media Group Limited. All Rights Reserved.
Powered with by OrientWebs